काँग्रेस र नयाँ शक्ति ले, पाँच ‘स’ को रणनीतिमा अघि सार्यो निषेधाज्ञा तोड्ने चेतावनी
नेपाली कङ्ग्रेशले पाच स को रणनीति अघि सार्ने निर्णय गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार को काम बिरूद्द असन्तुस्ठी बन्दै अाएको दल तोकेको निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले निषेधाज्ञा तोड्ने चेतावनी दिएको हो । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक भट्टराइले सरकार ले समाजबाद भुलेको भन्दै समृद्दीको जन्तालाइअास
कुरो होइन सरकार काम गरेर देखाऊ,जनताको कान पाकिसक्यो
काठमाडौं । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको हम्मेसी बुझ्न गाह्रो पथ्र्यो । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली प्रष्ट छ । तर व्यवहारमा देउवा प्रष्ट मानिन्छन भने ओली बुझ्न गाह्रो मानिएका प्रधानमन्त्रीमा पर्छन । यी दुईको सरकारबीचको काम गराईमा भने के फरक छ त ? जवाफ हुन्छ खासै फरक छैन् । अघिल्लो सरकार र
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठक विशेष कारणवश आज साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगन भएको छ । आज अपराह्न १ बजे बैठक बस्ने पूर्व निर्धारित कार्यसूची थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत हुन सकेन । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विधेयकमा केही प्रावधानमा सहमति हुन नसक्दा
नेपाल एयरलाईन्सले भित्र्याएको विमानमा यस्तो विशेषता !
काठमाडौं । नेपाल एयरलाईन्सले पहिलोपटक वाइडबडी विमान नेपाल भित्र्याएको छ । एयरलाईन्सले ‘ए ३३०–२००’ सिरिजको विमान बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । नयाँ विमानलाई ‘अन्नपूर्ण’ नाम दिइएको छ । अन्नपूर्णले आगामी अगस्ट १ बाट व्यवसायिक उडान सुरु गर्ने पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो छ विमानको विशेषता २ सय ७४
सभामुख र उपसभामुखको पदमै अन्योल के गर्लान अब
काठमाडाैँ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने माग राखी सरकार, सभामुख र संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । संसदमा यही विषयमा सत्रा र प्रतिपक्षीको सधैँजसो जुहारी नै चल्ने गरेको छ । विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेस सांसदहरुले दिनैपिच्छे सोझो वा घुमाउरो भाषमा यही आवाज उठाईरहेका छन् । नेकपा एमाले र